အလှ တရားတွေ နဲ့ ညို့ယူ ဖမ်းစား လိုက်ပြီး မြန်မာ ဝတ်စုံလေး နဲ့ ရှင်ယွန်းမြတ်…. – Shwe Naung
အလှ တရားတွေ နဲ့ ညို့ယူ ဖမ်းစား လိုက်ပြီး မြန်မာ ဝတ်စုံလေး နဲ့ ရှင်ယွန်းမြတ်….
N N | May 22, 2021 | Celebrity | No Comments
ရှင်ယွန်းမြတ် ကတော့ ဆွဲဆောင် မှုရှိပြီး ဆက်စီ ကျလွန်းတဲ့ ပုံရိပ် လေးတွေနဲ့ ပရိသတ် တွေကို အမြဲဖမ်းစားလေ့ရှိ တယ်ဆိုတာ ပရိသတ်တွေသိရှိပြီးဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်။
ချစ်စရာ အပြုံးပိုင်ရှင် လေးဖြစ်သလို အမြဲဖက်ရှင် ကျကျလေးတွေနဲ့ ပရိသတ် တွေအသည်းကို ခြွေချတတ် သူလေးမို့ ပရိသတ်တွေသတိထား မိလာ သူလေးလဲဖြစ်ပါတယ်။
သူမ ကတော့ အနုပညာ လောက ထဲကို မော်ဒယ် တစ်ယောက်အနေနဲ့ကနေ စတင် ဝင်ရောက်လာခဲ့ သူတစ်ယောက် ဖြစ်ပြီး နောက်ပိုင်းမှာတော့ သူမရဲ့ ကြိုးစားမှု တွေကြောင့် သရုပ်ဆောင် အလုပ်တွေနဲ့ ဇာတ်ကားတွေမှာပါပါ ဝင်သရုပ်ဆောင်လာတာကိုတွေ့ မြင်ရပါတယ်။
လန်းလွန်းတဲ့ sexy ကျကျပုံ လေးတွေ ကြောင့်လည်း ယောကျာ်းလေး ပရိသတ် အများဆုံး ဝန်းရံမှုနဲ့ အားပေးမှုတွေ လည်းများစွာ ရှိနေတာ ကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။
အဆီပို မရှိဘဲ ကျစ်လစ် ဖွံ့ထွားပြီး ဆက်စီ ကျတဲ့ သူမရဲ့ အမိုက်စားပုံ တွေနဲ့ ညို့အားပြင်းပြင်း ဆွဲဆောင်နိုင် သူလေး ဖြစ်တာကြောင့် လက်ရှိဖေ့ဘွတ် စာမျက်နှာမှာ ရေပန်းစားလူ ကြိုက်များကာ ပုရိသတွေ ဝန်းရံနေကြတာ လည်းဖြစ်ပါတယ်။
လတ်တလော မှာတော့ မြန်မာ ဝတ်စုံလေးဝတ်ကာ စွဲမက်စရာ ကောင်းလောက်အောင် ဆွဲဆောင်မှု ရှိရှိလှရက် လွန်းနေတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကို ဖော်ပြထားတာ တွေ့ရတာကြောင့် ပရိသတ် ကြီးတွက် မျှဝေပေး လိုက်ပါတယ်။
လှုပ်ခါ ပြီး အားရ ပါးရ ကပြ လိုက် တဲ့ စုလှိုင်ဝင်း ရုပ်သံ
အတွင်းသားလေးတွေ ပေါ်လွင်အောင်ကို ဆက်ဆီကျကျ ဆွဲဆောင်မှုရှိနေတဲ့ ရွှေအိမ်စည်ရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်လေးများ…….